Home » Ny olona ao amin'ny Travel & fizahan-tany » Hihena ve ny zafikelintsika na endasina?
Profesora Geoffrey Lipman dia maniry fatratra ny fiovan'ny toetr'andro.
Tsy tiany ny hihetsiketsika na hanendasa ny zafikeliny - izao no antony.
Miorina any Bruxelles, Belzika izy ary nanazava ny antony mahatonga ny fiovan'ny toetrandro ho lehibe kokoa noho ny Coronavirus. Niresaka tamin'ny herintaona izy fanarenana ny dia fifanakalozan-kevitra nataon'ny Tambajotra fizahan-tany manerantany o0n zoma,
Mpanorina ny Tale jeneraly mpanampy WTTC teo aloha an'ny UNWTO, izy no mpamily lehibe teo amin'ny sehatry ny fizahantany sy fizahan-tany manerantany nandritra ny am-polony taona maro. Geoffrey dia mizara ny eritreriny momba ny maha-zava-dehibe ny fiovan'ny toetr'andro, sy ny asany ao anatin'ny tamba-jotra SunX.
Fanarenana ny fomba Travel WTTC